Ogaden News Agency (ONA) – Xidhiidhkii qarsoonaa ee ka dhexeeyay Shabaabka iyo Itobiya ayaa ku fashilmay Kismaayo
Xidhiidhkii qarsoonaa ee ka dhexeeyay Shabaabka iyo Itobiya ayaa ku fashilmay Kismaayo
Posted by ONA Admin	/ November 9, 2011
Weerarkii ay ciidamada Kenya ku qaadeen Shabaabka ka taliya Jubada Hoose wuxuu soo saaray arima badanoo u qarsoonaa dawladda Itobiya. Itobiya oo Caalamka ka dhaadhicisay inay kula dagaalanto Somaliya argagixisada caalamaiga ee Shabaabka taageera ayaa waxaa la filayay markay Kenya ku duushay Shabaabka jooga Kismaayo inay taageero hiil iyo hooba ah ula dagdagto. Marna lama filaynin inay Itobiya isku daydo inay carqaladayso arintaa iyadoo adeegsanaysa M/Weynaha xukuumadda ku-meel gaadhka (TFG) Sh. Sahriif iyo xubna ka mid ah dawladiisa. Waxaase ka dhabqiyay Itobiya markay dawladda Kenya fahamtay ciyaarta siday u socoto oy ku gacan sydhay fariimaha loo soo dhiibay Sh. Shariif iyo qaar ka mid ah xukuumadiisa, caalamkana uu ku taageeray Kenya talaabada ay qaaday. Itobiya waxay dhacdadaa ka dib fikirtay siyaaba kale inay u qasto hawlgalka ciidamada Kenya, waji-gabaxa ka raacayna ay meel kale la doonato.
Waxaa ku xigtay in si lama filaan ah loo maqlay warar sheegaya 3ex dayaaradood inay keeneen magaalada Baydhabo hub khatar ah oo loo wado Shabaabka. Waxaana markii ugu horeysay u sheegay saxaafadda arintaa xubin ka mid ah baarlamaaknka Somaliya oo u sheegay inuu hayo warar xaqiiqa ah oo sheegaya inay jiraan dayaarado ka soo dajiyay hub farabadan magaalada Baydhabo isagoo yidhi; “Waxaan Beesha Caalamka ugu baqayaa in tilabo laga qaado Dowlada Eriteria maadaama ay hub siiso Al-Shabaab oo ay taageerto”.
Waxaa ku xigtay Sh. Shariif oo si lama filaan ah ugu dhawaaqay in aanay raali ka ahayn ciidamada ajnabiga ah ee soo galay Somaliya uguna baaqay inay ciidamada Kenya ka baxaan Somaliya. Waa la wada ogsoonyahay inuusan Sh. Shariif ka talinin Somaliya wax dhaafsan xerada uu ku jiro ee ciidamada AMISOM ay ku ilaalinayaan. Durbadiiba waxaa loo fahmay inuu yahay dhawaaq ka soo yeedhay Itobiya, sidaa darteed ayay dawladda Kenya wafdi balaadhan ugu dirtay Addisababa.
Maalma ka dibna waxaa ku xigay inay kooxda isku magacawday Ahlu suna yidhaahdaan waxaan la dagaalanay ciidan ONLF ah oo ka soo galay xeebta badweynta Hindi oo qaar ka mid ah aan u dhiibnay ciidamada Itobiya.
Ujeedada Itobiya wuxuu ahaa in dagaalka ka socda Jubada Hoose ee u dhexeeya Shabaabka iyo ciidamada Kenya lugta loo galiyo dawladda Eretria si loogu eedeeyo ka dibna sidaa lagu iloobo oy ku qariso fashilkii ka soo gaadhay isku daygeedii ahaa inay joojiso weerarka ay Kenya ku qaaday Shabaabka iyadoo adeegsanaysa xukuumadda Sh. Shariif.
Caalamka si fiican ayuu ugu jahawareeray ujeedada Itobiya ay ka lahayd arintaa. Maadaama la ogsoonaa taakulaynta ugu badan Shabaabka inay ka helaan dakadaha Kismaayo, waxaa la filayay inay xukuumadda ku-meel gaadhka ah taageerto talaabada ay qaaday Kenya, hasa ahaatee Itobiya oo talaaba kasta oy qaadayso xukuumadda Sh. Shariif lagala tashado, marnaba raali kama aha in Shabaabka laga qabsado Jubada Hoose. Waxaa la ogsoonyahay inay Itobiya culays xoogan ay saartey dawladda Kenya say u joojiso ciidankii lagu tababary Kenya in la geeyo Jubada Hoose. Arintaana waxay u adeegsatay Itobiya Sh. Shariif oo awoodiisoo idil isugu geeyay in aan ciidanka Prof. Gaandi la gaynin Jubada Hoose.
Caalamka siduu uga jawaabay eedeymaha loo soo jeediyay Eretria?
Inkastoo aan si qayaxan loo diidin hadana sida muuqata looma dhaga nuglaanin oo siday Itobiya rabtay durbadiiba luuguma boodin Eretria. Saxaafadda qaarkood ayaaba qoray inay dhici karto in Itobiya arintaa ka dambayso oo laga yaabo inay hubkaasi iyada soo galisay ka dibna ay eeda dusha ka saareyso Eretria si loogu dhuujiyo cunaqabataynta saaran. Waxayna u daliishadeen warbixinadii lagu soo qoray Wikileaks ee sheegayay inay dawladda Itobiya ka dambaysay qaraxyadii ka dhacay Adisababa oy ku eedeysay ururka OLF iyo dawladda Eretria.
Waxyaabaha qarsoon ee mar un caalamka uu ka warheli doono hasa ahaatee ay Somali badan ogaadeen hadda waxaa ka mid ah xidhiidhka ka dhexeeya Shabaabka jooga Jubada Hoose iyo sirdoonka Itobiya. Itobiya waxay sas ka qaaday ONLF, waxayna u aragtaa inuu saaxiib la yahay Itobiya urur kasta oo colaadiya ONLF. Itobiya siyaasad aan lahayn mabda’a oo ku dhisan maslaxad gumaysi ayay kula dhaqantaa shacabka Somaliyeed, mana kala jecla Sh. Shariif iyo Sh. Daahir Awes.
Siyaasadaha ay kula dagaalanto Itobiya xoogagga ka soo horjeeda dulmigeeda iyo is-balaadhinteeda waxaa ku fulisaa qaar ka mid ah xukuumadda ku-meel gaadhka ah iyo maamulada ay Somaliya ka dhistay iyo urur goboleedka IGAD oo kolba xukuumadii dana gaar ah uu dhex maro ay kula gorgortanto.
s/c maasha Allah isha ayaad katuurteen xaqa waa sax sida aad wax ucadeeyseen sidaasna dadka wax u ifiya ileen xog ogaal baad tahiinee
asc/wr/wb dad aad u badan oo somali ah ayaan eegin wax ka baxsan waxay indhuhu arki karaan ama ay saxaafada gumaysiga iyo xeeladihiisa ku dhisan ka dheehdaan, taasina waxay dhaxalsiisay in ay waligood ahaa daan doqoni qufacday meel lagaraacayna moog arintaas wax sii magoogaynaya magac yada beer laxawsiga ah ee al kabilawda oo dadka aragtida gaaban diinta ka haysta u arkaan muqadas ama wax aan wax laga sheegi karin oo qofka uyar ayaa ku odhanaya hakudambaabin, waad ku mahadsan tihiin faalada in kastoon jeclaan lahaa in aad meelo kale marisaan